We.com.mm - တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသိပဲပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှား (၅) ချက်…။
လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲတမ်းလုပ်ကြပါတယ်…။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပြုလုပ်မိတဲ့အမှားတွေကြောင့် သင့်ကိုထိခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…။ ဒီတော့ အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေက သင့်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအချက်တွေကို ကောင်းမွန်သွားအောင်ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်…။
၁. နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ လက်နဲ့အုပ်မိတာ…
နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီတိုင်းဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခြားသူတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့် အုပ်ပြီးတော့ဆိုးကြပါလို့ပြောကြပါတယ်…။ ဒီတော့ လူတွေလွဲမှားစွာပြုလုပ်မိနေတာကတော့ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ လက်နဲ့အုပ်ပြီး ဆိုးလိုက်မိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ဒီလိုလက်နဲ့အုပ်ပြီး ဆိုးလိုက်မိတဲ့အခါမှာ မမြင်ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက လက်ပေါ်မှာကပ်ပါသွားပြီး ရောဂါတွေကို ပျံ့နှံ့စေပါတယ်…။ ရောဂါပိုးတွေကပ်ပါသွားတဲ့လက်နဲ့ မျက်လုံးကိုပွတ်မိသွားတဲ့အခါတွေမှာလည်း မျက်လုံးထဲကိုရောဂါပိုးတွေဝင်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လက်ကိုင်ပဝါ ဒါမှမဟုတ် တစ်ရှူးနဲ့အုပ်ပြီးဆိုးမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ…။
လက်သည်းတွေညှပ်မယ်ဆိုလည်း လက်သည်းညှပ်နဲ့ပဲညှပ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတတ်ကြပါတယ်…။ အမှန်တကယ်ကတော့ လက်သည်းညှပ်နဲ့ သင့်လက်သည်းရှည်နေတာတွေကို ညှပ်မယ်ဆိုရင် သင်လက်သည်းတွေကို ပိုပြီးကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေပါတယ်…။ အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လက်သည်းတိုက်တဲ့ တံစဉ်းလေးနဲ့ပဲ လိုက်ညှိပေးပြီးတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လက်သည်းတွေကိုလည်း မပျက်စီးစေတော့ပါဘူး…။
၃. မျက်ခမ်းအောက်ကို Eyeliner တွေထည့်ခြင်း…
မိန်းကလေးတော်တော်များများပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားတစ်ခုပါပဲ…။ မျက်လုံးအောက်ထဲကို ပိုမိုလှပစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး Eyeliner တွေဆိုးတာကလည်း သင့်မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်…။ မျက်လုံးအောက်မှာခြယ်ထားတဲ့ Eyeliner တွေက မျက်ရည်တွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးထဲကိုဝင်ပြီး ပိုးမွှားဝင်ရောက်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်…။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးအောက်ကို ခြယ်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘရပ်ရှ်နဲ့ Eyeshadow ကိုအသုံးပြုပြီး မျက်လုံးအောက်ကို ခြယ်သပေးလို့ရပါတယ်နော်…။
၄. ရေချိုးတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဆပ်ပြာတိုက်တာ…
ဒါကလည်း လူတိုင်းလုပ်မိနေတဲ့အမှားတစ်ခုပါပဲ…။ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ လူတိုင်းနီးပါးဆပ်ပြာတိုက်ကြပါတယ်…။ ခန္ဓာကိုယ်မှာမူလထဲကရှိနေတဲ့ဆဲလ်တွေက ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကိုလည်းစိုပြေစေပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆကတော့ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ဆပ်ပြာတိုက်မှ ပိုပြီးသန့်စင်တယ်လို့ မှတ်ထင်နေကြတာပါ…။
တကယ်တမ်းကတော့ ဆပ်ပြာတိုက်တယ်ဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပဲ သေစေနိုင်ပါတယ်…။ ရေချိုးတိုင်းဆပ်ပြာတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အသားအရေတွေကို အဆီဓာတ်ကင်းပြီး ခြောက်သွေ့လာစေနိုင်ပါတယ်…။
၅. သွားတိုက်တဲ့အခါမှာ သွားတိုက်ဆေးတွေအများကြီးသုံးတာ…
သွားတိုက်တဲ့အခါမှာ သွားတိုက်ဆေးတွေအများကြီးထည့်ပြီးအသုံးပြုတာကလည်း မှားယွင်းနေတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ…။ သွားတိုက်ဆေးတွေ အများကြီးထည့်သုံးတဲ့အခါမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေပိုပြီး ကင်းဝေးစေပြီး သွားတွေပိုပြီးသန့်စင်တယ်လို့ မှတ်ယူထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင် ပဲစေ့အရွယ်အစားလောက်ဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဆန်စေ့ပမာဏလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်…
မိန်းကလေးအများစုမှာရှိတတ်တဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ အကျင့်များ